VIDEO:-Kumanaan Ruux oo Banaan bax ka dhan ah Al-Shabaab ka Dhigay Bayhdabo | warsanradio baydhabo
Akhriso:-Boqor tooyada Sacudiga oo tacsi u diray qoyska...
Dhageyso:-Musharax Cabdi Caziis Xasan [Lafta Gareen] oo soogaaaray...
Home WARARKA MAANTA	VIDEO:-Kumanaan Ruux oo Banaan bax ka dhan ah Al-Shabaab ka Dhigay Bayhdabo
Kumanaan Dadweynaha magaalada Baydhabo ah ayaa ka qeyb qaley Isu soo bax Bulshada Koonfur Galbeed ay ku muujinayeen dareenkooda ku aadan Weererkii Musiibada ahaa ee 14-kii bishan ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho.
Ardayda ayaa laga fasaxay Iskuulada Magaalada, Ganacsatadii ayaa goobahooda Ganacsi Albaabada u laabay, Shaqaalaha Dowlada oo aan la shaqa tagin,dhamaan waxay qeyb ka ahaayeen Isu soo baxan loogu baroor diiqayay Boqolaalkii dhibaatada kasoo gaartey Qaraxa.
Madax ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa dadka isku soo baxay Socodka wadooyinka ay ku marayeen kala qeyb galey si iyagana dareenkooda u muujiyaan,waxaana ka mid ahaa Wasiirka Amniga, Gudoomiyaha Gobalka Bay, kan Degmada Baydhabo, Ururada Bulshada rayidka,Haweenka iyo Dhalinyarada.
Dadka isku soo baxay oo u badnaa Dhalinyaro Wiilal iyo Gabdho Isugu jira ayaa madaxa uga xirnaa Maro Gaduudan,waxay ku dhawaaqayeen erayo Lidi ku ah Al-Shabaab.
Bulshada oo socodka kasoo bilaabeen Garoonka Kubadda Cagta ee Magaalada Baydhabo waxay socod ku gaareen Buundada Isha Baydhabo,halkaas oo laba saac ka badan qoraxda la taagnaa,iyadoona daqiiqad kasta dad hor leh fagaaraha imaanayeen.
Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh aadan ayaa shaley ugu baaqay shacabka Koonfur galbeed iney Walaalahooda dareenkooda u muujiyaan.
Wasiirka Amniga Koonfur galbeed,Gudoomiyaha Gobalka Bay,Kan degmada,ururada Bulshada rayidka,Haweenka gobal iyo Degmo,Dhalinyarada ayaa qeyb ka ahaa Isu soo baxan.
M/weynaha Dowlad Gobaleedka Koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh aadan ayaa Shaley ku dhawaaqey in bulshada koonfur Galbeed dareenkooda u muujiyaan Qoysaska Boqolaalkii eheladooda ahaa dhibaatada kasoo gaartey Mashqadii 14-kii bishan ka dhacdey Muqdisho.
VIDEO:-Kumanaan Ruux oo Banaan bax ka dhan ah Al-Shabaab ka Dhigay Bayhdabo was last modified: October 18th, 2017 by warsan radio
Akhriso:-Boqorka Sucuudiga oo la kulmay Ra’iisul Wasaare Kheyre